Yenza i-self-portrait yakho ngesitayile seJometri | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJorge Neira | | Umzekeliso
La ngamanyathelo ekufuneka elandelwe ukwenza ifayile yakho umzobo wakho kwisitayile sejiyometriusebenzisa Adobe Illustrator.
Senza njani i-geometric self-portrait?
1: Khetha ifoto apho ubona ubuso namagxa.
2: Yenza ifayile ye- uxwebhu olutsha lwama-600x480px kwiAdobe Illustrator kwaye uhlele maleko ngale ndlela:
Zoba apho uza kwenza khona umzekeliso.
Beka ifoto njengesikhokelo.
Zoba isikwere esinemilinganiselo efanayo nexwebhu, ulipeyinte grey.
3: Sebenzisa ifoto yesalathiso, uyile uyilo lwakho kwi "Eraser", usebenzisa isixhobo "Ibrashi". Yenza imigca ethe tye, yenza lula iinkcukacha ezininzi kangangoko kunokwenzeka kwaye ucime umaleko wesithathu.
4: Cwangcisa i-eraser opacity ukuya kwi-30% kwaye utshixe umaleko usebenzisa i-padlock. Qala ukudweba ukusuka ezantsi uye phambili usebenzisa i isixhobo sepensile. Usebenzisa 1pt ubukhulu kunye nomnyama, cacisa iinwele usebenzisa imigca ethe tye.
5: Zoba ihafu yehempe, emva koko khuphela kwaye uncamathisele ngaphambili, Sebenzisa isixhobo "Phinda" kwaye ujikeleze into ebiphindiwe. Khetha zombini iindlela kunye nokusebenzisa iPathfinder> Unite Option, ukuze Dibanisa zombini iimilo.
6: Zoba ikhola yehempe usebenzisa i Isixhobo sepoligoni, uze ubeke iimilo kwisiseko sentamo.
7: Sebenzisa inkqubo efanayo ekubunjweni kobuso; umzobo we-octagon kwaye ukhethe iindawo ezingaphezulu zokuwela.
Zisuse ngotolo olumhlophe kunye / okanye uzihlengahlengise usebenzisa isixhobo esikalini, ukubanakho ukuphinda le fomathi kwaye uyisebenzise ebusweni, emva koko kwenye ikopi, sebenzisa iPathfinder> iMinus Front ukusika ifomathi yentamo.
8: Ukongeza iinkcukacha, sebenzisa Izixhobo zoBume kunye nepensile.
9: Cinezela D kwaye umzekeliso uza kuvela.
10: Ukwenza imilebe isebenzise i-hexagon. Yolula amacala usebenzise i isixhobo esikalini ukutshintsha ifomathi. Zoba unxantathu kwaye ulungelelanise phakathi.
Sebenzisa iPathfinder> thabatha umphambili ukucima unxantathu ophezulu emilebeni, emva koko ukope kwaye uncamathisele phambi kwemilebe, tshintsha imilinganiselo yefomathi kwiziko.
11: Ukwenza amehlo, sebenzisa i-octagon usebenzisa i -Shift + E-Eraser Tool-, susa icandelo elisezantsi lefomathi.
Emva koko susa ifomathi usebenzisa iShift + Alt ukukopa, ukuphinda ubume obuyisiseko kunye nokusebenzisa Iminus ngaphambili kwiPathfinder, eya kuba ngumthunzi wamehlo, phinda kwakhona ukwenza imivimbo. Sketch i-octagon encinci ye-iris, emva koko uyiguqule wenze indawo esezantsi yamehlo.
12: Ngempumlo, yenza i-octagon kwakhona. Guqula amanqaku ahlukeneyo kunye yongeza ezinye iiankile ezantsi kwempumlo, emva koko uzobe ii-octagoni ezininzi kunye nezinye iifomathi ezilula, ukongeza iinkcukacha kunye nevolumu.
13: Ukugqiba umzekeliso, ukongeza umbala kunye neenkcukacha ozifunayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Umzekeliso » Yenza umzobo wakho wokuzimela ngesitayile seJometri